Izibonelelo zeSalfure Soap | Amadoda aQinisekileyo
El isepha yesalfure Yenye yezona zicetyiswa kakhulu ziidermatologists ukulwa namabala kunye namaqhakuva. Isalfure ngumgubo otyheli onephunga elinamandla, kwaye uvelisa a isenzo anti-ukudumba, i-astringent, i-detoxifier kunye ne-disinfectant. Kodwa isalfure aluncedo kuphela kulusu olunamafutha.
El induna yenye yeengxaki eziqhelekileyo zokufikisa. Kweli nqanaba lobomi, ukwanda kwemisebenzi yehomoni kuyanda, kubangela ukufumba kwe-sebum kunye neebhaktiriya ezitshisa ulusu. iifollic zolusu. Amafutha awanakukhutshwa nge-pores kwaye kuvela amnyama amnyama.
El isepha yesalfure Yenye yezona zisetyenziselwa ulusu olunamafutha, ngakumbi kwindawo ye-T (ibunzi, impumlo kunye nesilevu). Kungenxa yoko le nto kucetyiswa ukuba uhlambe ubuso bakho yonke imihla ngale sepha inceda ukomisa ulusu. Ukongeza, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe imveliso eyanceda ukutyhila ifayile ye- pores.
La kugula ezingapheliyo ye-psoriasis, enxulunyaniswa nengxaki yamajoni omzimba, ibonakalisa ukuyilwa kwesikhumba, ngakumbi entlonzeni, emadolweni, engqinibeni, izandla nangasemva.
Nangona ihlala inyangwa mayeza, ayifanelekanga kakhulu ukusebenzisa isepha encedisa ukunciphisa ezi zinto iimpawu. Isalfure inamandla okubulala iintsholongwane anceda ukuphelisa iibhaktheriya kunye nokunciphisa ukubumba kobofu. Ikwavumela nokuxobuka ulusu ukuba lubuyele kumbulelo wesiqhelo kwiipropathi zalo ze ummiselo we-sebum.
La dermatitis seborrheic kukudumba kolusu kunye nokhakhayi okubangela ukuqhwanyaza. Ukusetyenziswa kwe isepha yesalfure Rhoqo kwiintsuku ezimbini, kwisigaba sayo esibukhali, kuyayiphucula inkangeleko yolusu.
Sakuba sigqityiwe esi sigaba, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe kube kanye ngeveki ukwenzela ukuba ungakwenzi oko yome ulusu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Izibonelelo zesepha yesalfure